Khao Yai, Little Italy of Thailand | NU MYAT AROUND THE WORLD
Posted on March 14, 2017 by Nu Myat
အီတလီဆီလေယာဉ်အကြာကြီးစီးပြီး သွားစရာမလိုတော့ဘူး။ ဘန်ကောက်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားရုံနဲ့ အီတလီရွာလေးရောက်နိုင်ပြီလေ။ ပျော်စရာကြီးနော်…
နေကြာပန်းခင်းတွေ၊ စပျစ်ခြံလေးတွေ၊ သိုးခြံလေးတွေ၊ ရဲတိုက်ကြီးတွေ ရှိတော့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသွားပြီ ဟုတ်??
အဲဒီနေရာလေးကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက ခေါင်းရိုင်ပါ။
ခေါင်းရိုင်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ တတိယအကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီး ဖြစ်ပြီး တောတွေ၊ တောင်တွေ၊ ရေတံခွန်တွေနဲ့ သဘာဝအတိုင်း သာယာလှပလှပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားတာက အနီးအနားတ၀ိုက်မှာ အီတလီနိုင်ငံက မြို့လေးလိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ နေရာလေးတွေရှိနေတာပါပဲ။ နုမြတ်တို့လို ဓာတ်ပုံဝါသနာအိုးတွေ အကြိုက်ပေါ့လေ။ Pre Wedding ပုံလေးတွေ ရိုက်လို့လှတဲ့နေရာတွေလည်း အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်ဆို စိတ်ဝင်စားသွားပြီဟုတ်????
ခေါင်းရိုင်ကို ဘန်ကောက်ကနေ သွားရင် ၂နာရီကျော်ကျော်လောက်မောင်းရပါတယ်။ မနက်၇နာရီထွက်ရင် ၉နာရီကျော်ကျော်ရောက်ပါတယ်။ အဲ့မှာတစ်နေကုန်လည်ပြီး ညနေ၄နာရီလောက်ပြန်ထွက်ရင် ဘန်ကောက်ကို ည၇နာရီလောက်ပြန်ရောက်မှာပါ။
သွားမယ်ဆိုရင် ကားစင်းလုံးဌားသွားမှ အဆင်ပြေပါမယ်။ Public Transport နဲ့ သွားရင် ဟိုမှာ သွားလာရခက်ပါ့မယ်။
#ဘယ်မှာတည်းမလဲ ( Accomodation )
နေရာအစုံလည်း လည်ချင်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေး နားနားနေနေသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ညအိပ်ပါ။ နုမြတ်တို့တုန်းက တစ်ညအိပ်ခဲ့တယ်။ ဟိုတယ်တွေက Theme အမျိုးမျိုးနဲ့ ချစ်စရာလေးတွေ။ ဈေးလည်း မဆိုးဘူး။ အဲ့က ဟိုတယ်တွေက Tourist Attraction လို ဖြစ်နေတယ်ရော…ဟိုတယ်တွေကလည်း ကြည့်ပါဦး။ အာကာသယာဉ်ကြီးတွေလိုမျိုး၊ ဧရာမ မှိုပွင့်ကြီးတွေလိုမျိုး၊ ရဲတိုက်ကြီးလိုမျိုး၊ Lords of the Ring ကားထဲက hobbit လူပုလေးတွေနေတဲ့ အိမ်ပုလေးတွေလိုမျိုး၊ သစ်ပင်အိမ်လိုမျိုး အဆန်းလေးတွေလုပ်ထားတာ။
နုမြတ်တို့ကတော့ Palio Piazza နားက Balios Resort ဆိုတာ တည်းခဲ့တာ။ ၂ယောက်ခန်း ၁ညကို ဘတ် ၂၅၀၀။ အီတလီက ဟိုတယ်လေးတွေလို ပြင်ထားတာ။ တော်တော်ခမ်းနားပါတယ်။
#ဘာတွေလည်ရမလဲ (Tourist Attractions)
ဒီနေရာလေးကြောင့် ခေါင်းရိုင်လာချင်ခဲ့တာ။ ခေါင်းရိုင်မှာ မရောက်မဖြစ်ပေါ့။ အီတလီရွာလေးလို ခံစားရမယ့်နေရာလေးပါ။ ဂိတ်ထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ အီတလီနိုင်ငံ ပြန်ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အဆောက်အအုံလေးတွေ၊ ကျောက်ခင်းလမ်းလေးတွေ လှမှလှ။ ဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ဓာတ်ပုံတွေ အမုန်းရိုက်တာပေါ့။ အိမ်ကြိုအိမ်ကြားမကျန် လျှောက်သွားပြီးတော့လေ။ ဒီမှာ Pre wedding ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ပန်းလေးတွေ၊ အလှဆင်ထားတဲ့နေရာလေးတွေ အများကြီးပဲ။ Pre wedding အတွက် package လေးတွေရှိတယ်တဲ့။ ကိုယ်တောင်ဘာမှ ယူသွားစရာမလိုလောက်ဘူး။ သူတို့ Website မှာ ကြေငြာထားတာ။ မဆိုးဘူးနော်။
နောက်ပြီးသူ့မှာသဘောကျတာက ရွာအငွေ့အသက်ရအောင် သိုးလေးတွေ မြည်းလေးတွေ ထားပေးထားတာ။ မြက်လည်း အလကား ကျွေးလို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံမပေးရဘူး။ အကောင်လေးတွေ အစာလုတောင်းတာ ချစ်စရာလေးတွေ။
၀င်ကြေး – 100 baht (၄၀၀၀ကျပ်)
ဒီနေရာလေးလည်း ဥရောပအငွေ့အသက်ရစေတယ်။ အီတလီကမြို့ထဲ ရောက်သွားသလိုပဲ။ အီတလီက Tuscany မြို့လေးကို ထိုင်းနိုင်ငံရွှေ့ထားတာလို့ သူတို့ကတင်စားထားကြတယ်။ ဒီနေရာမှာကတော့ ဈေးဆိုင်လေးတွေ၊ မုန့်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ လေဟာပြင် Shopping Center သဘောမျိုးပါပဲ။ လမ်းကြိုလမ်းကြားထဲ တစ်လမ်းဝင်တစ်လမ်းထွက် အေးအေးဆေးဆေး လျှောက်ရင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းပေ့ါ။ ဒီက ဈေးဆိုင်တွေက ဈေးကြီးလို့ မ၀ယ်ပါနဲ့။ ဒီမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိပါတယ်။
၀င်ကြေး – အခမဲ့
ဂျာမနီရံတိုက်ကြီးတွေလို ဆောက်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပါ။ အပြင်ပန်းက ထည်ဝါသလို အတွင်းဘက်ကလည်း ခမ်းနားလှပါတယ်။ ဘိုစာနဲ့ ထိုင်းစာတွေရနိုင်ပါတယ်။ ဈေးကတော့ တစ်ပွဲ ၁သောင်းဝန်းကျင်ပါ။ ပေးရတာနဲ့ သူ့ Atmosphere နဲ့ တန်ပါတယ်။ Dinner ကို အဲ့မှာစားဖို့ Recommend ပေးပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ အပျော်ဆုံးပေါ့။ သြစတြေးလျက Factory Outlet ထဲ ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ။ တကယ့်ကမ္ဘာကျော် Brand တွေကို စက်ရုံဈေးနဲ့ ရသလို Discount လည်း ထပ်လျှော့တော့တန်မှတန်ပေါ့။ လျှော့တာမှ ၉၅%ထိလျှော့ပါတယ်ဆို။ အလကားရသလိုပါပဲ။
စပျစ်ဝိုင်တွေ ထုတ်လုပ်ရာ စပျစ်ခြံပါ။ စပျစ်ခြံထဲ ၀ိုင်ဘယ်လိုလုပ်လဲ လိုက်ရှင်းပြတာကိုတော့ ဘတ် ၂၀၀ပေးပြီး join ရပါတယ်။ ၀ိုင်ဖြူ၊ ၀ိုင်နီ၊ နှင်းဆီဝိုင် ၃ခွက်တောင် အမြည်းပေးတိုက်တော့ တန်တယ်ဆိုရမှာပါ။ စပျစ်စိုက်ခင်းတွေ၊ ၀ိုင်ချက်တဲ့ အခန်းတွေ၊ ၀ိုင်တွေ သိုလှောင်တဲ့ အခန်းတွေတစ်ခန်းပြီး တစ်ခန်း လိုက်ရှင်းပြတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ ၀ိုင်သိုလှောင်ရာ အအေးခန်းထဲမယ် ၀ိုင်နံ့လေးတွေဆို တစ်ခန်းလုံး မွှေးနေတာပဲ။ ၀ိုင်စည်ကြီးတွေနဲ့လည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့။
Winery Tour – ဘတ် ၂၀၀(ကျပ်၈၀၀၀)
ဧက ၁၀၀ကျော်ကျယ်တဲ့ ခြံဝန်းကြီးထဲ ပန်းရောင်စုံတွေ စိုက်ထားတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးပါ။ သူ့ရာသီချိန်ကျရင် Lavender ပန်းခင်းတောင်မြင်ရဦးမှာပါ။ ရာသီချိန်မဟုတ်လည်း လှနေအောင် အလှဆင်ထားလို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ့်နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ပန်းလေးတွေ မြင်ရတာနဲ့တင် စိတ်ချမ်းသာစရာပါ။
၀င်ကြေး – ဘတ် ၁၀၀(ကျပ်၄၀၀၀)
တောင်စောင်းတောင်လည်မှာ တည်ထားတဲ့ ဘုရားဆင်းတုကြီးဖြစ်လို့ ဟိုးအဝေးကြီးကနေ ဖူးမြော်နိုင်ပါတယ်။ တောင်စိမ်းစိမ်းမှာ ဆင်းတုအဖြူက ၀င်းနေလို့ သပ္ပါယ်လှပါတယ်။
ချောကလက်ကြိုက်တဲ့သူတွေ အတွက် ချောကလက်မျိုးစုံရောင်းချပေးတဲ့ ချောကလက်ဆိုင်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ချောကလက် လုပ်လို့ရပြီး ကိုယ်လုပ်တဲ့ ချောကလက် ကိုယ်ယူသွားလို့ရပါတယ်။ ချောကလက်တွေက တကယ်စစ်ပါတယ်။
မှိုစိုက်ပျိုးမွေးမြူတာကိုလေ့လာနိုင်တဲ့နေရာပါ။ လင်ဇီးမှိုအပါအ၀င် မှိုမျိုးစုံကို ဘယ်လို ပျိုးထောင်လည်း ဘယ်လို မွေးမြူစိုက်ပျိုးလဲ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ မှိုပုံစံအိမ်လေးမှာ ညအိပ်လို့တောင်ရပါသေးတယ်။
ခေါင်းရိုင်မှာ လည်စရာတွေ အများကြီးပါ။ နုမြတ်မရောက်ဖြစ်ဘဲ ကျန်နေတာတွေမှ အများကြီး။ အဲ့နေရာတွေက
– ခေါင်းရိုင်ရဲ့ အဓိကနေရာဖြစ်ပြီး ရေတံခွန်ကြီးရှိတဲ့ Khao Yai National Park
– Waterboom လို ရေကစားကွင်းတွေ တခြားစီးစရာတွေ အစုံရှိတဲ့ Scenic World ကစားကွင်း
– ခြုံပုတ်တွေနဲ့ ၀င်္ဂဘာလိုလုပ်ထားတဲ့ Pete Maze
– ရှားပါးတိရစ္ဆာန်တွေ ပြသထားတဲ့ Exotic Zoo
– လန်ဒန်နဲ့တူတဲ့ Thames Valley
– သိုးလေးတွေလွှတ်ထားတဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ A cup of Loveပန်းခြံ
– နေကြာပန်းတွေ မျက်စိတစ်ဆုံးမြင်ရတဲ့ Saraburi Sunflower Field
– အမေရိကန် ကောင်းဘွိုင်တွေနေတဲ့ နေရာလို ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Panther Creek Resort
– Hobbits လေးတွေနေတဲ့ အိမ်ပုလေးတွေရှိရာ Hobbit House
နိုဝင်ဘာလကနေ ဖေဖော်ဝါရီလအထိပါ။ အဲ့အချိန် ရာသီဥတုအေးပြီး သာယာတယ်။ ပန်းခင်းတွေ နေကြာခင်းတွေလည်းလှတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်ဆိုပူပါတယ်။
– ပုံတွေထဲ တွေ့ရတဲ့ Lavender ပန်းခင်းတို့ နေကြာပန်းခင်းတို့က သူ့ရာသီကြမှ လှပါတယ်။ ပန်းတွေဝေဆာနေတာမြင်ချင်ရင် အေးတဲ့ဆောင်းတွင်းဖြစ်တဲ့ နိုဝင်ဘာလကနေ ဖေဖော်ဝါရီလထဲ သွားပါ။ ဒါပေမဲ့ ပုံတွေထဲကလောက်တော့ မမှန်းနဲ့ပေါ့နော်။ ဘယ်နေရာမဆို ဘယ်အရာမဆို ရိုက်တဲ့သူတော်ရင် Editing skill ကောင်းရင် လှနေတာပဲဆိုတော့လေ။
– နယ်မြို့ဆိုတော့ ဘန်ကောက်လိုမစည်ကားပါဘူး။ ဒီတော့ ဘန်ကောက်လို လမ်းဘေးစာတွေ မုန့်ဆိုင်တွေ Shopping Center ကြီးတွေ ရှိမနေပါဘူး။ တို့ထိတို့ထိ စားချင်စိတ်ကို အောင့်အည်းထားရပါမယ်။ အဓိကက ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့နဲ့ သဘာဝအလှတရားကိုခံစားရဖို့ မဟုတ်လား။
– ရာသီဥတုက မအေးပါဘူး။ ပူတောင်ပူနေသေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့ နေပူသက်သာအောင်တော့ သတိထားနော်။
– စားသောက်ဆိုင်တွေ ရှိပေမဲ့ ရှားလို့ အဲ့မှာဆိုင်လေးတစ်ခုညွှန်းချင်တယ်။ Steak Laos ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ အဲဒီက လာအိုစာတွေ၊ ခေါင်းရိုင်ရိုးရာစာတွေက ဈေးလည်းသက်သာ အရသာလည်းရှိတယ်။
– Primo Piazza မှာစားစရာဆိုင်မရှိဘူး။ ကော်ဖီဆိုင်တော့ရှိပေမဲ့ ဈေးကြီးတယ်။ Palio မှာတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။
အဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘန်ကောက်ကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတဲ့ နေရာတွေ များစွာရှိပါတယ်။ အယုဒ္ဒယ၊ ပတ္တရားကမ်းခြေ၊ ဟွာဟင်းကမ်းခြေ၊ ကပ်ချနာပူရီစသဖြင့်ပေါ့။ ဒီနေရာတွေ ရောက်ဖူးပြီးသားပဲဖြစ်ဖြစ် တမူထူးခြားတဲ့ နေရာအသစ်အဆန်းလေးသွားလိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းရိုင်ဟာလည်း လည်စရာတွေစုံတဲ့ နေရာလေးပါလို့…
This entry was posted in Animals, Asia, Thailand, Uncategorized and tagged Asia, Thailand, Travel. Bookmark the permalink.
← Cruise on Nile, the Longest River on Earth
Sleeping Beauty Fairy Tale Castle, Neuschwanstein →